IIPLANI EZINGAMA-50 EZIGQWESILEYO ZOKULALA IGUMBI LOKULALA ELILUHLAZA-UKUTHOBA IMIBALA KWIDONGA - UYILO LWEKHAYA
Iiplani ezingama-50 eziGqwesileyo zokuLala igumbi lokulala eliluhlaza-Ukuthoba imibala kwiDonga
I-Navy eluhlaza okwesibhakabhaka iphethe iintsingiselo ezininzi kubantu abaninzi. Kwabanye ngumbala wohambo lomntu ebudodeni, umbala weeyunifomu kunye nesibindi, kunye nokusebenzela ilizwe lakhe kunye noluntu.
Kwabanye luyolo lolwandle oluphakamileyo kunye nokunethezeka ngaxeshanye kwezikhephe kunye namaqela okuhamba ngeenqanawa.
Naphi na apho uwa khona kwibala, akukho mpazamo kwigumbi lokulala eliluhlaza okwesibhakabhaka njengayo nayiphi na into kodwa luphawu lodidi lobudoda kunye nomdyarho woburharha.
ubambo lwentambo kumvambo wamadoda
I-blue blue ayiyinto engaqhelekanga kwisikimu sokulala sendabuko, kodwa ukuyila kwanamhlanje kuqhuba i-gamut engenakuphikiswa ye-nautical ukuya kwi-chic ephezulu. Imigca eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nemhlophe igcwele kwindawo yokuhlala koomatiloshe, kodwa i-dusky hue enzulu ijikeleze umnumzana ophakamileyo. Ngenxa yobuqili be-eclectic, i-navy eluhlaza okwesibhakabhaka inokudibanisa ngokwenyani nakweyiphi na itafile yesitayile segumbi lokulala.
Ipeyinti etyebileyo yepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka inokulitshintsha ngoko nangoko igumbi libe yimowudi yamadoda, ngelixa ulungelelwaniso lokulala kunye nempahla iguqula igumbi lakho lokulala libe yindawo yoxolo lwe-stoic kunye nezinto ezifanelekileyo. Umkhosi wamanzi ngowabantu abancinci entliziyweni kodwa bakhule ngokuziphatha; ngumbala wendoda eyaziyo indlela yayo ehlabathini, kodwa ingoyiki ukuphambuka endleleni amaxesha ngamaxesha.
Nokuba ukhetha iziqwenga ezimbalwa zokutyikitya ukuze ucime igumbi lakho okanye uzimisele ukuhamba ngayo yonke indlela yasemanzini, lo ngumbala ekunzima ukuwenza gwenxa. Bold kodwa understated, aphelelwa lixesha kodwa uhlala ngalo mzuzu, i-navy ngumbala wawo wonke umntu othe ngxi ume ngaphandle kwesihlwele.
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziPhambili ze-90 + zeBlue Bedroom
Ihlabathi leemfazwe zobumbano
I-lotion efanelekileyo ye tattoos emva kokukhathalela
konke ukubona uyilo lwe tattoo
Ungandilibali uyilo lwe tattoo
Iindawo ezimbi kakhulu zokufumana tattoo
iinwele ezimfutshane zeenwele ezimfutshane